HandBrake: Vhura Sosi Vhidhiyo Transcoder | Linux Vakapindwa muropa
HandBrake ndeye yemahara uye yakavhurwa sosi transcoding software. Iyo inowanikwawo yeGNU / Linux uye inokutendera iwe kushandura zvese zviri zviviri odhiyo nevhidhiyo kuitira kudzikisa saizi yemafaira anokonzeresa.
Mukuwedzera, zvave zvakadaro yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa uye ita kuti hupenyu huve nyore kune vashandisi. Yayo graphical interface inonzwisisika, iwe unongofanirwa kuwedzera odhiyo kana vhidhiyo mafaera aunoda kushandura, sarudza ma parameter aunoda mune yako kesi (mhando yeinoburitsa mudziyo fomati, resolution, codec, kana iwe uchida kuigadzirisira iyo webhu, kwainoenda, ...), uye tinya Start Encode kutanga ...
Izwi transcoder inosiyana neye encoder. Yekutanga haina kuzivikanwa seyechipiri. Ichokwadi kuti ese ari maviri anoreva chinhu chimwechete mune zvine chinangwa mazwi, ndiko kuti, kugona kushandura kana kushandura kubva pane imwe fomati kuenda pane imwe. Asi, mutsauko uri mu:
Encode: inotsanangura chiito chekushandura sosi yeanalog kubva kudigital fomati. Semuenzaniso, kana mimhanzi ikapfuudzwa kubva kune yeanalog medium senge kaseti kuenda kune yedhijitari svikiro seMP3.
Transcode: ndidzo shanduko kubva padhijitari fomati kuenda kune imwe fomati yedigital. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuenda kubva kuAVI fomati kuenda kune MP4.
Nekudaro, vanhu vazhinji vanoshandisa izwi rekuti "kodhi seyakajairwa" kudaidza mamiriro ese ari maviri.
Zvakanaka, kudzokera kuHandBrake, zvinokutendera iwe kusarudza iyo vhidhiyo uye odhiyo macodec kuburitsa uye ichagadzirisa iyo yekuisa faira kuti itorezve midhiya uchishandisa iyo codec nyowani iyo iwe yaunoda kuishandura iyo (mamwe macodec anokutendera iwe kumanikidza dhata kudzikisa saizi yeiyo yekupedzisira faira, kunyangwe pamutengo wekurasa mamwe yekupedzisira mhando).
Ehe, HandBrake inotsigira inonyanya kufarirwa vhidhiyo uye odhiyo macodec, senge iwo e mafomati MP4 (mpeg4, H264, x264,…), MOV (DivX, WMV, Mpeg2,…), AVI (Divx, Xvid,…), MKV (DivX, Xvid, H264, x264, H265, HEVC,…), FLV ( VP6 uye H264 akasiyana), nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » HandBrake - Vhura Sosi Vhidhiyo Transcoder
Kubuntu 21.04 Hirsute Hippo inosvika nePlasma 5.21, KDE Zvishandiso 20.12.3 uye nezvimwe